Sary vongana haran-dranomasina avy amin'ity mpanakanto ity | Famoronana an-tserasera
La haran-dranomasina sy haran-dranomasina lavitra be izy ireo mifanatrika amin'ny toerana misy azy ireo. Fa raha atambatra amin'ny endrika sary sokitra toa an'i Joshua Abarbanel izy ireo, karazana synergy sy hatsarana no noforonina tokony hotononina sy hoderaina amin'ny asan'ity mpanao sary sokitra ity.
Abarbanel no mikarakara amboary ny fizarana hazo mamorona haran-dranomasina ho sary sokitra manana kalitao lehibe sy kanto vita kanto. Ny mpanakanto dia mamorona lamina amin'ny solosaina mba hanohizana ny fanapahana laser sasany hamita ny fanangonana ny sangan'asa farany izay miteraka vokatra tena sarotra araka ny nasongadin'ireo fizarana isan-karazany avy amin'ireo andalana ireo
Toy ny inona no mamorona ny yin yang ao amin'ny mazava sy ao amin'ny maizina, ny haran-dranomasina sy ny hazo dia mamorona mpivady dihy tsara tarehy indrindra mba hiteraka sary sokitra izay mampiseho ny fomba fanoherana rehefa misy asa lehibe atao amin'izy ireo dia manolotra ireo famaranana ireo.
Na dia mampiasa ny teknikan'ny teknolojia solosaina mba handalo ny sary noforoniny tamin'ny fisainany mba hitondrana antsika alohan'ny dinamita mahery vaika sy fampiasana tsara ny feo samy hafa amin'ny ala isan-karazany ampiasainy. Mpanakanto iray izay mampiseho amin'izao fotoana izao ao amin'ny Porch Gallery any Ojai, California hatramin'ny 29 Mey, ka raha akaiky ny sasany amin'ireo izay mamaky anay dia azonao atao ny mijanona hitady ireo haran-dranomasina tany am-boalohany sy manaitra izay misy hazo toy ny fitaovam-pamokarana.
Ianao dia manana ny instagram, ny facebook-nao y tranokalan'izy ireo for araho ny fampirantiana hafa ary ny soritra navelan'ny tsirairay tamin'ireo sary vongana tena tany am-boalohany. Ny asa vita amin'ny hazo izay, na dia mampiasa ny solosaina aza amin'ny fanapahana laser, dia mendrika hotononina amin'ity volavola ity ihany.
Herinandro lasa izay nanana ny ravina ho fitaovana amin'ny karazana sary sokitra hafa izahay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ny sary sokitra haran-dranomasina tsara tarehy sy be pitsiny vita amin'ny hazo